[Kulungisiwe] Ubuntu ulenga ekuqaleni: isikrini esimnyama / esinsomi sokufa | Kusuka kuLinux
[I-Fixed] Ubuntu ilenga ekuqaleni: isikrini esimnyama / esinsomi sokufa
Sekuyiminyaka ngingasebenzisi Ubuntu, kodwa ngolunye usuku, ngizama ukufaka Ubuntu 13.04 kwikhompyutha yomngani, ngibuye ngibe namaphupho amabi futhi: ngemuva kokufakwa ngempumelelo okusobala uhlelo "lulenga" ekuqaleni bese kuvela i-az screen ... Uxolo, UViolet, ngemuva kokukhumbula uMark Shuttleworth nawo wonke umndeni wakhe, ngathola isixazululo, engihlanganyela nawe.
Iphutha livame ukwenzeka lapho usebenzisa amakhadi wevidiyo we-Nvidia noma we-AMD, noma ilaptop ene-Optimus noma efanayo, evumela ukusetshenziswa kwamakhadi emidwebo ama-2 ashintshanayo. Ubuntu, njengoba bungezi nabashayeli abanobunikazi abafakiwe, bangaba nezinkinga ekusebenzeni nabo.
Isixazululo ukuqala i-Ubuntu, kanye kumodi ye-nomodeet ukudlula isikrini esimnyama noma esinsomi (njengoba kungenzeka), landa futhi ufake amadrayivu afanele, bese uqala kabusha ukulungisa inkinga unomphela.
1.- Qala ikhompyutha bese ucindezela ukhiye weShift ekuqaleni, ukuthola imenyu yeGrub. Sebenzisa izinkinobho zemicibisholo ukuzula / ukugqamisa ukungena okuhambelana no-Ubuntu (imvamisa okokuqala okokuqala)
2.- Cindezela ukhiye e ukuhlela ukuhlela, okuzoveza imininingwane eningiliziwe ye-boot:
3.- Thola okufakiwe njengoba kukhonjisiwe kusithombe-skrini esingenhla. Sebenzisa imicibisholo yekhibhodi ukufika kuyo, bese ngicindezela inkinobho ethi End ukuya ekugcineni kolayini (okungaba umugqa olandelayo, ngokudida).
Ngafaka igama elithi nomodeet njengoba kukhonjisiwe kusikrini-skrini ngashaya i-Ctrl + X ukuqala uhlelo.
Uma konke kuhamba kahle, uhlelo luzoqala ngaphandle kwezinkinga futhi uzokwazi ukufaka abashayeli abaphathelene.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » [I-Fixed] Ubuntu ilenga ekuqaleni: isikrini esimnyama / esinsomi sokufa
Amazwana ayi-88, shiya okwakho
Njengamanje ungazisa haha, isixazululo sihle kakhulu uma sisebenza, ngikhathele ukufaka Ubuntu 12.04, abashayeli abayinkulungwane abanikazi abalayishwe ekhasini le-AMD bekhadi lami levidiyo leRadeon HD 6550M .. futhi njalo lapho ngiqala kabusha lalibuyela ku ngiqedile ukufaka iXubuntu 12.04 kanye nabashayeli abaphethe lapho futhi basebenza kahle .. Noma kunjalo ngiyabonga ngesixazululo!
Sawubona, umbuzo owodwa, bathini abashayeli abaphethe futhi ngibalanda kuphi?
Kuhle kakhulu! Ixazululwe ngokushesha ... Ngiyabonga kakhulu
Umqondo ngemuva kokufaka ubuntu, ukuqala kabusha nokuya kumodi ye-nomodeset, lapho sekuqalile kuleyo mode ukufaka abashayeli bese uqala kabusha?
Kujwayelekile uma uhlanganise + ihluzo ezinikele, kwenzeka nakuDebian futhi kungadala ukuthi umqaphi ungaqali. Ukukhubaza i-BIOS eyakhelwe ngaphakathi nakho kuxazulula amacala afanayo. 'i-nomodeet' ipholile, kufanele uyazi. ^^
Ngiyabona ukuthi i-ubuntu 12.04 ngoba i-kernel ingu-3.2, leyo ye-raringtailtail engu-3.8, i-12.04 inginike izinkinga nge-nvidia GT520 kodwa ngezinguqulo ezilandelayo akufanele zenzeke, empeleni ngiku-12.10 nabashayeli abaphethe futhi ngicebile into i-LTS engazange ifinyelele kuyo
Ngiqhubeke njengoba kungumhlahlandlela wakho futhi lutho ... isikrini esimnyama silokhu sivele bese singena ku-Ubuntu kepha ngaphandle kwesihlobisi sewindi noma ubunye noma ibha.
Ngine-Acer Aspire Z3101 Nvidia Gt520 Ubuntu 13.04
Kwenzeka into efanayo kimi, ngine-acer aspire 5516
Uma ufaka Ubuntu, kuyinkinga yomshayeli. Ngabashayeli bangaphambilini be-ATIHD4330 yami, ukuhlobisa kwedeskithophu bekuqhekeka, kungishiya ngingenabo ubunye futhi ngingenayo imingcele yewindi.
Uma unefayela /etc/X11/xorg.conf, nika i-VESA driver (esikhundleni se-nvidia) bese uzama ukufaka umshayeli we-NVIDIA kusuka kuzilungiselelo zohlelo. Ungazama futhi 'nouveau' noma, ngqo, susa ifayela le-xorg.conf
(Ngingaba nephutha, ngiyabanda endabeni yabashayeli bemidwebo kusukela ku-amd-legacy entsha, kepha ngaphambi kokuthi ngihlupheke kakhulu nge-fokin 'fglrx' ye ati)
Kungcono ngibe nenkinga ngakolunye uhlangothi, umshayeli wamahhala ungisebenzela kahle, kepha lapho ngifaka eyomnikazi isikrini siba mnyama futhi imvamisa kufanele ngifomathe futhi. Lokhu kusebenza kunoma iyiphi i-distro engiyisebenzisile (ubuntu 12.10, 13.04, eOS ene-kernel 3.8, manjaro, chakra, njll), futhi kufanele isebenze, ngoba ukwehlisela phansi i-xorg kuvamise ukukwenza kahle.
Okuqinisekile ngukuthi kwi-radeon hd 4200 yami ngisebenzisa kuphela umshayeli wamahhala 🙁, ngivalelise kokuhlangenwe nakho okungcono kusitimu
Nami kwenzeka okufanayo nakuwe. Nganginomshayeli mahhala futhi lapho ngiya kweyimfihlo ngasala nginesikrini esimnyama ... ngingenzani?
Phendula uJuan Antonio
hernando sanchez kusho
Okuthile okufanayo kwenzeka ngeMageia, kungenzeka yini ukuyixazulula ngale ndlela?
Ngiyethemba, ngiyabonga ngalolu lwazi oluthokozisayo.
Phendula u-hernando sanchez
UCesar Benavidez kusho
Kwenzeka okufanayo kimi ngemuva kokufaka isibuyekezo ku-Ubuntu 12.04, kusebenza ngokuphelele ngiyabonga.
Phendula uCésar Benavidez
UNilzer Camacho Alvarez kusho
Sanibonani nonke. Ukubingelela nokubonga
Phendula uNilzer Camacho Alvarez
Kusebenze kahle kimi, ngiyabonga
Ngikwenze lokho nge-nomodeet futhi ayisebenzi .. ikhombisa amapharamitha amaningi kepha angikwazi ukuqala ubuntu .. isithombe esimnyama silokhu sivele futhi sinyamalale ngesikhombisi
Imvamisa le yinkinga yokuphathwa kwamandla, ngiyixazulule kanjena: Shintsha ipharamitha ye- "splash buthule" ibe yi- "nolapic" khumbula ukugcina izinguquko. Ungazisiza ngohlelo lwe-grub customizer, olungangeni ezinqolobaneni.
UJuventino Saavedra Sanchez kusho
Ngakho-ke ngingaxazulula inkinga yami, ngiyabonga. Kuyinto «nolapic» esikhundleni «kuthule splash nomodeset»
Phendula uJuventino Saavedra Sanchez
Kuhle! Siyabonga ngokushiya umbono wakho.
Enye indlela yokuthola i-grub?
Imayini, 13.10, ukucindezela ukushintsha akuhambi, kuyalayisha njengokujwayelekile bese kubuyela esimweni se-catatonic.
U-ALEJANDRO DE ALBA kusho
Nami ngiyafana, ukhiye wokushintsha awusebenzi
Phendula ku-ALEJANDRO DE ALBA
Abangane: Ngishiya lesi sixhumanisi ku-Ubuntu wiki esemthethweni lapho ithi khona ukushintshwa kufanele kusebenze. Uma kungenjalo, mhlawumbe i-GRUB ayifakanga kahle. Okuwukuphela kwesixazululo engingacabanga ngaso ukusebenzisa i-Ubuntu disk disk yokufaka, ukuqala lapho, bese ngifaka kabusha noma ngilungiselela i-grub kusuka lapho.
Ungazama okulandelayo: qala kabusha i-PC, faka i-BIOS bese uphuma ngaphandle kokushintsha noma yini, bese u-yebo, bamba inkinobho ye-Shift.
Sanibonani nonke, i-ubuntu bami ivuselelwe ku-13.04 futhi manje lapho ivuselelwa ku-13.10 ilenga lapho kuqala ngesikrini esimnyama ngemuva nje kokudlula kwi-grub. Ukuphela kwendlela yokuqala ukukhetha imodi yokuqalisa 3.2
ahhh ngiyabonga kakhulu kuqala uyabona ukuthi kwenzekani kimi ngesikrini esimnyama !!! yiKAOTICA !!! U-HAHAHA ungisebenzele ngokushintsha i- «splash buthule» kuya ku-nolapic
iyiphi i-ubuntu version engizame ngayo nge-13.10 yami futhi ayisebenzi
UDiego R kusho
Ngizamile ku-Ubuntu 12.04 LTS
Phendula u-Diego R
Ngibe nezinsuku ezi-2 nginenkinga efanayo ...
UJuan jiron kusho
Ngiyabonga kakhulu mngani, okuthunyelwe kwakho kuyasiza kakhulu
Phendula uJuan jiron
Sawubona ntambama, uzobona, ngafaka Ubuntu 13.04 ku-pc yami eyayinamawindows 7 kepha manje ekuqaleni ihlala ibambekile, angiyiboni i-grub noma yini, nginqume ukususa i-hard disk nokususa konke ukwahlukanisa, ku ukuze ngiqale kusuka ku-0, kepha ngilokhu ngidonsa isikrini esifanayo simnyama futhi lapho ihlala ibambekile ungangitshela ukuthi ngenzeni !!
Uyezwa uCarnala sengivele ngizamile lokhu esifundweni sakho futhi u-noo uphasile i-ubuntu ayisebenzisi isikrini esimnyama silenga ngombhalo engiwethula lelo igama lekhadi lami mdre haha ​​angazi noma ungasenza isandla sami lokhu ngikhathele ukusesha nginekhadi levidiyo nvidia plis helpmee Sengivele ngazama izinto eziningi kanti nooo inkinga ingaxazululwa aaaaaa
Ngabe kukhona umuntu ongangisiza ... faka ubuntu 13.10, uvuselele bese uqala kabusha ikhompyutha ... lapho ubona ukuthi ukufaka isoftware yokuphathelene kungadala amaphutha, ngilandele izinyathelo kulokhu okuthunyelwe kuleyo ncwadi ... kepha ayisebenzanga ... lapho ngiqala ubuntu yangicela iphasiwedi, ngemuva kokungena esikrinini kumnyama bha ... igrafu enginayo yi-nvidia, bese usebenzisa le miyalo ...
i-sudo engeza-apt-repository ppa: xorg-edgers / ppa
sudo apt-get ukufaka nvidia-319 nvidia-izilungiselelo-319
Ngiyethemba ungangisiza ... Ngiyabonga kusengaphambili
Sawubona, kwenzeka okufanayo kimi nge-black screen ... kodwa kuyiqiniso ukuthi kuyinkinga ngomshayeli wekhadi levidyo ... KODWA manje iyaqala, ingicela umsebenzisi, iphasiwedi bese ngemuva kwalokho kuvela umlayezo othi AKUKHO SIQINISEKISO bese uhlala ngaphakathi "Igama lomsebenzisi @ pcname: ¬ $"
futhi ihlala lapho, ngafaka kabusha idatha njenge-superuser yami, noma umsebenzisi futhi AKUKHO LUTHO ...
engikwenzayo? - SIZA MEeeeeee sicela nge-imeyili ramos.serruto@gmail.com
Okuthile okufanayo kwenzeka kimi: Ngithuthukisele ku-Ubuntu 13.10 futhi yafela lapho. I-nomodeset solocion ayisebenzelanga mina. Ngabe kukhona isenzo esingenziwa kutolika womyalo we-grub? Jabulela
Kepha uma ngine-windows 7 efakwe kokuhlukaniswa okukodwa nobuntu kokunye, ngabe isazohlonipha i-windows boot?
Sawubona, angiyena uchwepheshe, kepha futhi inkinga iqale i-Ubuntu disk yokufaka, isikrini sokuqala sivela lapho sivela khona uma ufuna ukufaka inguqulo yokuhlola futhi akukho okusele, ngicindezela u-enter futhi awuzungezi .
Ngisanda kuxazulula ivoti lapho ngibuyekeza ku-Ubuntu 14.04
Usizo!! Ngaphambi, lapho ngiqala, nganginezincwadi ezimbalwa futhi zazingaqali, kepha ngikwenzile lokhu futhi ngisathola into efanayo kepha ngezinhlamvu eziningi, ngithola amaphrofayili we-appArmor.
Kungisebenzele. Ngiqala sooooo, izixazululo ezinjengalezi zisindisa isikhumba sami. Ukubingelela okuvela e-Argentina
Kuhle kanjani. Kuhle kakhulu. Faka Ubuntu kwi-PC efanayo eyayifakwe kudiski yangaphambilini ephelelwe yisikhathi yaqala ngale nkinga. Njengoba kungesikho ukusetshenziswa kwami ​​okuyinhloko angizange ngiyinikeze ibhola eliningi kuze kube namuhla. Kujabulisa kanjani ukuphinde uyisebenzise hahaha. Ngibonga kakhulu.
Ngiyakutshela ukuthi inkinga ayisiqalo kuphela kimi njengabanye abangane lapho besebenza isikrini siba mnyama ayikho enye indlela ngaphandle kokuqalisa kabusha. Nginabanye abangane abakhethe ukubuyela ku-12.04 ixazululwe inkinga. Ungacabanga ukuthi kuzofanele bakuxazulule lokhu ngoba esikhundleni sokuthuthuka ngezinguqulo ezintsha, bagcina sebebi kakhulu.Kukhona abantu abanganeliseki neze ngalolu daba, balahlekelwe yisikhathi ngoba lapho beqala kabusha kunezikhathi lapho balahlekelwa ngumsebenzi entweni ekade bayenza.
Kepha akugcini lapho ngoba kuyinkimbinkimbi ngokuhamba uzungeze okuthile entweni okufanele ibe ngaphezu kokufakazelwa
Sawubona, ntambama enhle… kwenzeke into efanayo kimi, kepha lapho kuvela isibuko esinsomi, yalengiswa ngayiqala kabusha kaningi kangangokuthi kwafika isikhathi lapho isikrini simnyama, vele uvule amalambu wokukhanya aholwayo kukhibhodi; umlandeli angazwakala esebenza ... ngenzenjani?
ilenga ku- [0.279060] [i-firmware bug]: ACPI; Umbuzo we-BIOS _OSI (linux) uzitshiwe
Mat Ingelosi kusho
Ngine-version 14.04 futhi uma ngifaka iphasiwedi yami ayilayishi lutho.
Phendula uMat Ángel
kahle kahle kusho
Nginamawindi 7 afakiwe Ngizamile ukufaka ubuntu 14.04 ukusebenza nezinhlelo ezimbili kwi-hp mini 110 4100 inkinga ukuthi angikwazi ukuqala ukuqala .. ifaka kahle futhi lapho ngiqala kabusha ingikhombisa izinketho ukuze ngikwazi ukukhetha ukuthi iyiphi uhlelo engizoqala ngalo Uma ngikhetha windows ilayisha yonke into kepha uma ngikhetha i-linux ilenga esikrinini esinsomi…. Angikwazanga ukuthola impendulo yenkinga yami ... ngisize ngoba ngimusha ku-linux, ngisaqala ukwazi nokuxhumana nalolu hlelo ...
Phendula ku-jhoel galeano
Isixazululo esinconywe kokuthunyelwe asisebenzelanga wena?
Uma kunjalo, beka uthule uthule ubuyisele lapho ithi $ linuxgfxmode nge-nomodeet.
Ulayini kufanele ube yi-gfxmode nomodeet
Khumbula ukugcina izinguquko bese uqala kabusha.
Ngizamile nge-nomodeet, nge-nolapic futhi ngale ndlela kodwa yangasebenza ... isikrini simnyama. Mhlawumbe angitholi inketho yokugcina izinguquko ngoba uma ngiqala kabusha futhi ngibuyela emuva lapha kubonakala njengoba kwakunjalo ekuqaleni. Yini engahle ibe yindlela efanelekile yokugcina izinguquko?
Uxolo, yibaphi abashayeli abaphethe labo okhuluma ngabo ekugcineni, futhi ngibafaka kanjani? Ngimusha kulokhu, ngizoyithokozela impendulo yakho
Ngikisela ukuthi ufunde eminye yemihlahlandlela yethu ku-Ubuntu.
Futhi, uma usanda kuqala, qiniseka ukuhlola umhlahlandlela wethu Wabaqalayo:
Ngisebenzisa inguqulo 14.04 futhi ngemuva kokufaka iphasiwedi yami ukuqala isigaba sihlala lapho.
Sengivele ngizamile konke okungenhla futhi akukho okungisebenzele, kuhlala kusikrini esibubende.
Kungisebenzele ngokumane ngishaye ukhiye weshift kaningi ngenkathi ngiqala ukufaka i-USB. Ngiyabonga
Sengivele ngikwenzile ku-Ubuntu 14.10 kepha lapho ngiqala kabusha, kwenzeka into efanayo, yalengiswa emnyama, ngenzani ???
Sawubona, ngiyabonga ngomnikelo… Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngivuselele inguqulo yami ye-Ubuntu… Ngicabanga ukuthi ikhompyutha icishiwe ngaphambi kokuqeda… Bengilahlekile kakhulu…. Ngikwenzile konke okushilo kodwa ngathola isikrini esimnyama futhi ... ngiphinde ngazama inketho yesibili oyinikezile ... ngithola isikrini esibubende kanye nophawu lobuntu ... kuhlala kunjalo kuze kube phakade. Ngivale shaqa, ngazama ukufaka ubuntu ... futhi lutho, isikrini esimnyama futhi ... Uma wazi ukuthi ungayilungisa kanjani, ngingajabulela imininingwane. Ngiyabonga
Sawubona kusihlwa, yenza izinyathelo njengoba ushilo futhi azixazululi lutho kimi nakuzinhlelo zamafayela zivele. Noma yimaphi amanye amaphutha azozitshwa impande @
Ngikwenzile konke okushoyo futhi akungisebenzelanga ngiyaqhubeka nesikrini esimnyama …………………… ngiyabonga
ngendlela enginayo ubuntu 14.04….
i-pc yami ngu-Asus x553m
i-cpu intel bay trail dual-core 2830 kufika ku-2.42ghz
Ngine-AMD A4, RADEON GRAPHICS HD 8670M, lapho ngifaka, kuvela isikrini, kepha isikrini sifiphele, sikhubazekile, lapho ngizama ukuvula isifaki, akukho okubonakalayo, izinto zifiphele, ngubani ongasiza mina?
Sawubona Juan Carlos!
Mngani, uma ngizama ukufaka Ubuntu kwikhompyutha yami, ihlala inamathele ngemuva kokufakwa lapho iqala, ngizama ukuyilungisa njengeposi lakho kodwa angilitholi igama elizothatha indawo ye- "splash buthule" angiyitholi, ngabe kukhona okunye okungaba yikho?
UHektor Peña kusho
Ngiyabonga kakhulu, ungisindisile futhi bengizokufometha 🙂
Phendula uHektor Peña
Sawubona, angizange ngiyixazulule, ukwenze kanjani, hektor peña?
U-LUIS VELEZ kusho
Ngikutholile lokhu futhi kungisebenzele.
Nami ngibe nale nkinga. Kepha isu lami bekuwukusebenzisa umshini wami njengeseva engenakhanda ukuya ku-SSH, ngakho-ke angizikhathazanga ngokulungisa leli phutha kuze kube manje. (Futhi ngerekhodi, incazelo ephelele yephutha engihlangabezane nalo ekubonisweni kwami ​​kwe-Dell 2009W ne-Ubuntu 12.10 Server Edition bekungu "Out of range signal. Ayikwazi ukubonisa le modi yevidiyo, shintsha okokufaka kwekhompyutha kube ngu-1680 × 1050.")
Ngakho-ke uma uthola leli phutha futhi ufuna ukulilungisa ngemuva kokufakwa (futhi unokufinyelela kwe-SSH), yenza okulandelayo:
Shintsha / etc / default / grub config file; susa umugqa kulayini # GRUB_GFXMODE = 640 × 480
(Qaphela: Ekuqaleni leli fayela belilahlekile. Ngemuva kokuqalisa i-sudo update-grub amahlandla ambalwa lapho bengizama ukuphuma, iGrub2 ekugcineni ilidalile lelo fayela… Kuyinqaba!)
Buyekeza iGrub: Sudo update-grub
Qala kabusha iseva.
Futhi-ke konke kwasebenza ngomlingo! Ngiyethemba ukuthi lokhu kuyasiza komunye umuntu. Ngikufisela inhlanhla.
Phendula uLUIS VELEZ
UPedro Navarro kusho
Ngiyabonga kakhulu ngomnikelo, kube wusizo olukhulu. Isebenza kahle kakhulu.
Phendula uPedro Navarro
Kuyihlazo ukuthi bengikwenza izinyathelo zakho ukulungisa ubuntu bami kepha abungeni ngemuva kokuthayipha ishifti ngakho bengifuna ukwazi ukuthi ngabe uyakwazi engingakwenza ngiyabonga
ngiyabonga ngokufundisa ukulungisa le nkinga, ngenze kahle kakhulu ngalandela izinyathelo. Ngiphawule ngathi nginesikrini esimnyama (hhayi esinsomi) futhi yisikhombi kuphela esibonakalayo, engingasigudluza kodwa besikhona. Izinsuku ezi-3 ezedlule benginalo lolu daba ngiyabonga kakhulu bengivele ngishaya i-pc haha
Sawubona, NGINESIKHATHI SE-ACER V3; 472P-324J, NGEMUVA KOKULANDELA IZINYATHELO OZITHATAYO, KWABONAKALA KUNESIKRAYI ESITHI - QALA UHLU LWE-ODA FUTHI LUTHO LULEKHISWE LAPHO, NGENZENJANI?
ngemuva kwe-ctrl + x isikrini simnyama bhuqe futhi ikhompyutha ayenzi lutho….
ULucas Mateo Tabares kusho
okungenani ku-HP pavilion g7 yami isebenze, ngiyabonga kakhulu.
kukho konke lapho ngifaka okuthile okuhlobene ne-Ubuntu noma i-Debian, ayikaze ingifake kahle futhi angidingi nokufaka i-grub ... Ingabe kukhona okufana nalokhu okwenzeke kothile?
Phendula uLucas Mateo Tabares
I-Korean ADC noob kusho
angayi. Bika ...
Phendula ku-Korean ADC noob
robert misael kusho
Hhayi angazi noma ngabe yilokhu okwenzeka kimi, ngingumfundi wesiNgisi. izinhlelo comp. Lapho usebenzisa ukufaka okulungele ukufaka uhlelo, ngokuzumayo bekungangivumeli ukuthi ngiyisebenzise ukufaka izinhlelo ezahlukahlukene futhi bekungangivumeli futhi ngakhetha ukuqala kabusha ithanga kepha lapho ngilinika ubuntu eqenjini laqala ukulayisha kepha esikhundleni sokuvela uphawu kusuka ekulayisheni ubuntu ngithole iwindi elimnyama elinezici eziningi into enjengale: [KULUNGILE] izinhlamvu …… ..
ngakho-ke uhlu olude oluqala ngo-ok olulandelwa izici zobuntu. futhi akusishiyi leso sikrini ngivele ngithayiphe f1 futhi ngikwazi ukusebenzisa i-terminal probe esivele ngalokhu: Sudo su
dpkg -hlela -a
faka-faka -f ukufaka
thola ngokuzenzakalelayo ukuthuthukisa
thola ukufaka-faka i-ubuntu-desktop
thola ukuthola i-autoremove
kepha ayisebenzi kimi njengokutholwa kwe-apt-get -f
Phendula ku-roberto misael
sawubona kahle okwenzekile kimi ukuthi ngokungazelelwe bengifuna ukusebenzisa i-apt-get ukufaka ukufaka i-chrom engitshele yona ukuthi ngeke ihlolwe nge-apt-get -f install
futhi ngazama ukuzama nezinye izinhlelo kepha ngathola into efanayo ngabe sengikhetha ukuqala kabusha kepha lapho nginikeza ubuntu eqenjini angibange ngisalayisha i-logo ye-ubuntu
uma kungenjalo iwindi elimnyama elinohlu olude lwezici into enjengale:
[KULUNGILE] inhlamvu ……
[KULUNGILE] ingxenye jcnh
eziningi OK zilandelwa okuthile futhi ukusuka lapho akwenzeki ngokuthayipha f1 kungivumela ukuthi ngivule i-terminal emsulwa kepha akukho okucacayo futhi akuboni amadivayisi wangaphandle
Sengivele ngizamile lokhu:
fakela i-apt-get -f ufake futhi umise-ungathathi lutho lapho unikeza ukuvuselelwa nokuthuthuka ngithola uhlu olude lwe-dpkg enamafayela angenalutho
Angisazi ukuthi ngenzeni futhi ngikhathazekile ngoba nginemisebenzi eminingi yesikole lapho ngingakubonga kakhulu
U-Ezequiel noob: c kusho
I-HP 245 G4 notebook pc enesitika se-ubuntu
Lapho iqala kabusha, kubonakala sengathi i-disk unit / tmp ayitholakalanga
Angikhumbuli ukuthi yiziphi izinketho engizicindezele
Ngemuva kwalokho wangivumela ukuthi ngifake iphasiwedi futhi yayikhona, ngemuva kwesikhashana ihlala ku-violet ayiqali
Angifuni ukulahlekelwa izinto zami enginazo lapho i-TT_TT
Phendula u-Ezequiel noob: c
Bangani nginenkinga, ngiyethemba ungangisiza, ngafaka ubuntun ku-ho nge-amd turiin 64 ne-nvidia, futhi ngasizathu simbe angikwazi ukuxhuma kwi-inthanethi, noma ngekhebula noma nge-wireless, ngithanda ukwazi ukuthi ngabe umuntu othile inesixazululo, ngaphambi kokubonga ngesandla
Uphelele umngani omuhle kakhulu !!!
Ukwenza le nqubo ngikwazile ukuqala uhlelo. Inkinga ukuthi lapho ngifaka iphasiwedi ayiqali, kepha iphinda ingibuze. Kwenzeka okufanayo uma ngizama ukungena ngemvume njengesiGungu sezihambeli. Ngabe unawo umbono wokuthi inkinga ingaba yini? Ngine-Ubuntu 14.04 LTS
Ulysses Rigone kusho
Nge-32-bit Lubuntu ngibe nenkinga efanayo futhi inqubo isebenze kahle. Ngiphakamisa nabashayeli abaphethe.
Phendula ku-Ulises Rigone
Okubanjiwe kuncane kakhulu ukuthi kungabonakali nakancane. Ithi funa ukungena, usho ukuthini ngokungena? ukuqala? Jabulela
USergi cunill kusho
Ngiyabonga kakhulu, kungisebenzele okokuqala!
Phendula uSergi Cunill
U-Anthony Garcia kusho
Ngibonga kakhulu ngokungeseka kwakho… Kuhle kakhulu, kungisebenzele kahle kakhulu ku-Ubuntu 16.04 kwazise angikwazanga ukufaka abashayeli be-nvidia 304, ngiyabonga?
Phendula u-Anthony Garcia
Kuhle kakhulu, balondoloze usuku lwami, bengizoshintshela ku-Debian 10, kepha kuvele kimi ukuthi ngibuze i-google, nempendulo eqondile nelula, ngibuyele ku-inthanethi. Ngiyabonga
U-Etsel Negrin kusho
Ntambama, bengilokhu ngixhumana nale bhulogi nezinye selokhu ngaqala ukusebenzisa iLinux nobuntu, phakathi kokunye ukusatshalaliswa kuma-laptops ami, ngifuna ukufunda okuthile. Inkinga ukuthi ngemuva kokwenza isibuyekezo ku-Ubuntu 18.04.03, efakwe kanye neWindows 10, kwiLaptop ye-Plan Ceibal, ngenza ukuhlanza engikuhlongozwa yisitinali, nge-autoremove. Ekuvuseleleni i-grub ibuyekezwa futhi. Lapho ngiqeda ngiyayicisha bese kuthi ngemuva kwesikhashana ngiyiphinde ngiyivule futhi lapho i-grub iqala ukulayisha inginika lo myalezo futhi ukusuka lapho akwenzeki: / dev / mmcblk0p5: clean, 396225/1150560 files, 4402834 / Amabhulokhi angama-4612859
[7.271323] i2c_hid i2c-TPD1019: 00: chrisdbg i2c_hid_command– (ret = 2, Bala = 0)
neqiniso, noma ngabe ngiseshe kangakanani, angiqondanga ukuthi kwenzekeni. Ngenze inqubo efanayo yokuvuselela kwenye i-laptop efanayo futhi konke kuqhubeke kahle futhi ngaphandle kwezinkinga.
Phendula u-Etsel Negrín
Usanda kugcina i-laptop yami, ngiyabonga kakhulu!
Dario Zepeda kusho
Ngiyabingelela, akungisebenzelanga, isikrini esimnyama siyaqhubeka nokubonakala ngokucwayiza kwekhesa.
Impendulo ivela ku- Dario Zepeda:
Faka i-adaptha ye-Wifi mini ye-TP-LINK TL-WN725N (v2) ku-Arch Linux naku-Ubuntu 12.04+
Polly: Iklayenti elincane le-Twitter